(LAN) Local Area Network တစ်ခုတွင် CMD (command Prompt) ကိုသုံးပြီးကျွန်ုပ်တို့သိလိုသော IP,Sever, Name , Trace စသည်တို့ကို... ~ ITmanHOME
14:51 Network, နည်းပညာ No comments
(LAN) Local Area Network တစ်ခုတွင် CMD (command Prompt) ကိုသုံးပြီးကျွန်ုပ်တို့သိလိုသော IP,Sever, Name , Trace စသည်တို့ကို...
(LAN) Local Area Network တစ်ခုတွင် CMD (command Prompt) ကိုသုံးပြီး
ကျွန်ုပ်တို့သိလိုသော IP,Sever, Name , Trace စသည်တို့ကိုအလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင် ပါတယ်။
(သင်ဟာ Public Network တစ်ခုတွင် ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုလျှင် CMD ( commandPrompt) ကို အ သုံးပြုနိုင်ပေမယ့် Private address ကို အသုံးပြုတဲ့ (LAN)Local Area Networkများမှာတော့ Destination Sever ကို ရောက်ရှိအောင် UserName , Password များအသုံးပြုရသဖြင့် Advance Softwareများလိုအပ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။)
Public Network အတွင်းအသုံးပြုနေသော သင့်ကွန်ပျူတာမှ Lan Hacking ပြုလုပ်နည်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။ပထမဦးစွာ သင့်ကွန်ပျူတာ၏ Network Connection ကို Right Click နှိပ်ပြီးproperties ကိုရွေးပါ။ ထို့နောက် (TCP/IP) ကို (select) လုပ်ပြီး(propertiese ) ကို click ထပ်လုပ်ပါ။ ပေါ်လာသော Box မှ advanceကိုနှိပ်ပြီး WINS Tab မှ Default For NeBOIS ကို (select) လုပ်ပါ။
ယင်းနောက် (Local Area Network) ၏ main box ကိုပြန်သွားပြီး (File andPrint Sharing for Mic* A Networks ကို select လုပ်ပါ ။ ပြီးလျှင် enterခေါက်ပါ။ အထက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်တွေပြီး သွားပြီ ဆိုလျှင် သင့်ရဲ့ NetBIOS Setting ဟာအဆင်သင့် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပြီဖြစ် ပါ တယ်။ ဒီ NetBIOSSetting မှာ Command Prompt သုံးပြီး ရှာဖွေကြည့်ရအောင်။
အောက်မှာပြထားတဲ့ (CODE) လေးတွေကိုတော့ မှတ်မိဖို့လိုပါလိမ့်မယ် …
Command prompt (CMD) ကို ဘယ်လိုဖွင့်ရမယ်ဆိုတာတော့ သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Start > Run > (cmd) ရိုက်ထည့်ပါ > (Enter) ခေါက်ပါ။
Black Background နဲ့ Command Prompt box ပေါ်လာပါမယ်။ အထက်ပါ CODEတွေထဲ က အချို့ကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင် Command Prompt မှာရိုက်ထည့်ပြီး enterခေါက်ကြည့်ပါ။
ပေါ်လာသော data များကိုဖတိရှုပြီး ပိုမိုနားလည်လာမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး LAN (Local Area Network) မှာ ဘာတွေရှာဖွေနိုင်လဲဆိုတာဆက်လက်ဖော်ပြပါမယ်။ အားလုံးကို မဖော်ပြနိုင်ပေမဲ့ အကျိုးရှိမယ့်အဓိကအချက်လေးများကိုဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ကဲ ! လွယ်လွယ်ကူကူပဲစလိုက်ကြရအောင် …
၁။ Ping: (cmd) မှာ ping လို့ရိုက်ထည့်ပြီး မိမိသိထားသော IP address ဟာ
ဆက်သွယ်လို့ ရနိုင်/မရနိုင် (Active or Dead) ကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။
> Ping x . x . x . x ( x.x.x.x ဆိုတာကတော့ IP address ပါ။ဥပမာ။ ။ 165.115.12.135 )
> Ping www.whatever.com ( www.whatever.com ဆိုတာကတော့ သင့်အနေနဲ့ IP
address ကိုမသိဘဲ website name ကိုသာသိထားတဲ့ site တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
( Example : www. Yahoo.com )
မှတ်ချက် ။ ။ တစ်ကယ်လို့ သင် ping ခေါက်တဲ့ host ဟာ ICMP Packet blocking ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် Host down လို့ပြပါလိမ့်မယ်။
၂။ nslookup: ဒီ CODE ကတော့ လုပ်ငန်းများစွာလုပ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုကတော့ resolving DNS into IP ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ website ရဲ့ URL ကိုသိထားပြီး IP address ကို မသိဘူးဆိုပါတော့
> nslookup www.whatever.com လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
(www.whatever.com) ဆိုတာက သင် IP လိုချင်တဲ့ website name address
Enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ IP address ( xxx . xxx . xxx . xxx ) ကို ရှာပေးပါလိမ့်မယ်။
> နောက်တစ်ခုကတော့ Mail Server တစ်ခုရဲ့ IP ကို ရှာဖွေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
(cmd box) ထဲမှာ အောက်ပါအတိုင်းရိုက်ထည့်လိုက်ပါ …
nslookup (Enter ခေါက်ပါ။)
Set type=mx (Enter ခေါက်ပါ။)
Yahoo.com (Enter ခေါက်ပါ။)
ဒီ command မှာ yahoo.com ရဲ့ mail Server IP ကို ရှာပေးပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ DNS မှာသာအသုံးပြုခွင့်ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဘယ် Server ကိုမဆို IP address ရှာဖွေပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ mail Server IP Address ကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် Spoof email လုပ်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Spoof Email လုပ်ခြင်းအား အောက်ပါ link တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၃။ tracert: ဒီcommand ကတော့ အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ရာ လမ်းကြောင်းကို ရှာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
>tracert x.x.x.x (x.x.x.x ဆိုတာကတော့ IP address ပါ။)
>tracert www.whatever.com ( www.whatever.com ကတော့ IP မသိပဲ web name ကိုသာသိထားတဲ့ site ပါ။)
၄။ arp: ဒီcommand က သင့်ကို arp table ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
C:\_Documents and Settings\_hacker>arp -a
Interface: 10.0.0.136 — 0×20002
x.x.x.x 00-e0-4c-60-62-51 dynamic
x.x.x.x 00-1d-92-6c-e7-d3 dynamic
၅။ route: ဒီ command ဟာ သင့်ကိုNetwork Destination Netmask ,Gateway,Interface,Metric တို့ ကိုရှာပေးမှာပါ။
>route print (Enter ခေါက်ပါ။)
C:\_Documents and Settings\_hacker>route print
0×1 ……………………… MS TCP Loopback interface
0×20002 …00 1d 92 89 f4 f4 …… VIA Compatable Fast Ethernet Adapter – Packe
t Scheduler Miniport
xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx
Default Gateway: xx.x.x.x
၆။ ipconfig: ဒါတော့သိကြမှာပါ။ IP,Gateway နဲ့DNS အတွက်ပါပဲ။
>ipconfig (or) ipconfig all
>ipconfig/release (မိမိ IP ကိုဖယ်ထုတ်တာပါ။)
>ipconfig/renew (မိမိ IP ကိုအသစ်လုပ်တာပါ။)
သတိ။ ။ ipconfig/release နဲ့ipconfig/renew ရမ်းမလုပ်ပါနဲ့ ။ ပြင်လိုက်လို့ မရတော့ရင် ကျနော်မပါဘူးနော်………….။
ရ။ netstat: သင့် connection codition ကိုပြပေးမှာပါ။ ။
၈။ အခြား code လေးတွေကတော့
>net use\_ipaddressipc$ /user:administrator
>net use K\_computernameC$
Credit Ko Lin